မင်းတုန်းတွင် ဆောက်လက်စ တံတားလုပ်ငန်းခွင်ထဲ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ထိုးကျ၊ ခရီးသည် ဆယ်ဦး ထက်မနည်?? - Yangon Media Group
မင်းတုန်းတွင် ဆောက်လက်စ တံတားလုပ်ငန်းခွင်ထဲ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ထိုးကျ၊ ခရီးသည် ဆယ်ဦး ထက်မနည်??
မင်းတုန်းမြို့နယ်အတွင်း ဆောက်လက်စတံတား လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်ရာမှ ထိုး ကျခဲ့ပြီးခရီးသည်၁ဝဦး ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ် ၊ ငလှိုင်စမ်းကျေးရွာ ပုသိမ်-မုံရွာ ကားလမ်းမိုင်တိုင် အမှတ် (၁၃၇) အနီးတွင် မတ် ၃၁ ရက်နံနက် ၃ နာရီခန့်က မကွေး မှမင်းတုန်းသို့ မောင်းလာသည့်ခရီး သည်တင် Express ယာဉ်တစ်စီးသည် ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်ရာမှ တစ်ဆင့်အရှိန်လွန်ကာ ကားလမ်းဝဲဘက်ခြမ်းရှိ မြို့နယ်လမ်း ဦးစီးဌာနမှ ဆောက်လုပ်နေသည့် တံတားလုပ်ငန်းခွင် အတွင်းသို့ ထိုးကျခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ်ကျေး ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှနိုင်က ပြောသည်။
ထိုးကျခဲ့မှုကြောင့် ယာဉ်မှာ ဖောင်ဒေးရှင်းချနေသည့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ယာဉ်ခေါင်းပိုင်းမှာ စိုက်ကျနေကြောင်း၊ ယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ်မောင်းပါ ခရီးသည် ၄ဝ၊ ၅ဝ ခန့် လိုက်ပါလာကြောင်း၊ ထိုးကျမှုကြောင့်ခရီးသည် ၁ဝ ဦးထက်မနည်းပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများရရှိပြီး မင်းတုန်းမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ အခင်းဖြစ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးလှနိုင်က ”တံတားကလုပ်နေဆဲပါ။ ဆောက်လက်စပေါ့။ သံမဏိသံကွေးတွေ လောင်းနေ ပြီ။ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေစချနေတုန်းပဲ။ ယာဉ်ကယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက် သွားတယ်တူတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ကကားလမ်းတည့်တည့်ပဲ။ ရေနက် တွေဖြတ်လို့ တံတားတောင်းဆိုလို့ တံတားထိုးပေးနေတာ။ ကားက လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ခေါင်းစိုက်နေတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကမကျယ်လို့။ ကျယ်ရင် ကားလုံးလုံးကျနိုင်တယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ပြောသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲရှိသံဖရိန်များ ကွေးကောက် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ယာဉ်လည်းပျက်စီးခဲ့ ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ” လုပ်ငန်းခွင်အနီးတစ်ဝိုက် မှာသတိပေးဆိုင်းဘုတ်တွေရှိတယ်။ သတိတံတားဆောက်နေတယ်။လမ်းလွှဲကနေမောင်းပေါ့ ။ လမ်းလွှဲ တွေလုပ်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်။ မနေ့က တစ်မနက်လုံးကားက ဒီတိုင်းပဲ။ လုပ်ခွင်ငန်းကလည်း ရပ်ဆိုင်းထားတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းယာဉ်မတော်တဆမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး မင်းတုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်မတော်တဆမှုပုဒ်မ ဖြင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မောင်းကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ?